Sanadkee ayuu ahaa markii uu Mohamed Salah iska diiday inuu ku biiro Kooxda Real Madrid? – Gool FM
Sanadkee ayuu ahaa markii uu Mohamed Salah iska diiday inuu ku biiro Kooxda Real Madrid?
Haaruun May 17, 2020
(Liverpool) 17 Maajo 2020. Mohamed Salah ayaa iska diiday dalab uu ka helay Kooxda Real Madrid si uu baaqi ugu sii ahaado naadiga Liverpool sanadkii 2018-kii, sida laga soo xirgtay caawiyihii hore ee xulka Masar, Hany Ramzy.
Weeraryahankan ayaa la la xiriirinayay inuu ka tagayo garoonka Anfield intii lagu guda jiray suuqii la soo dhaafay, iyadoo Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ay inta badan ahaayeen kuwo xiiseynayay.
Ramzy ayaa sheegay in kooxda reer Spain ee Madrid runtii ay sameeyeen dalab si ay ula soo wareegaan Salah, laakiin weeraryahanka ayaa go’aansaday inuu iska sii joogo maadaama sida uu yiri uu ku faraxsanaa Merseyside-ka.
“Markii aan la shaqeynayay Hector Cuper, waxaan tababar ku lahayn xero tababar oo ku taal Switzerland bishii Marso sanadkii 2018,” ayuu Ramzy u sheegay OnTime Sports.
“Waxaan la hadlay Salah, wuxuuna ii sheegay in Real Madrid ay isaga u soo dirtay dalab.
“Dalabkaasi runtii waa uu fiicanaa, laakiin Salah ayaan ka wada hadalnay, aniga iyo Mr Cuper, waxaana uu go’aansaday inuu la sii joogo Liverpool sababtoo ah halkaas ayuu xasilooni ku dareemayey.”
Dalabkan ayaa yimid kaliya labo bilood ka hor markii Salah iyo kooxdiisa Liverpool ay final-ka Champions League ku wajaheen Real Madrid, kulankaasoo ka dhacay Magaalada Kiev ee dalka Ukraine.
Kulankaas ayay Real Madrid ku adkaatay 3-1, iyadoo goolashaas ay ka kala yimaadeen Karim Benzema iyo Gareth Bale, laakiin kulankaas waxaa qariyey dhaawac xilli hore oo soo gaaray Salah, kaasoo isagoo ilmadu ka qubanayso ka baxay garoonka, markii uu Sergio Ramos dhaawac garabka ah oo halis ahaa soo gaarsiiyey xiddiga xulka qaranka Masar.
Macallin Unai Emery oo shaaca ka qaaday xiddiga uu doonayey inuu keeno Kooxda Arsenal ka hor inta uusan la soo saxiixan Nicolas Pepe
Labada Manchester oo Real Madrid iyo Barcelona kula dagaallamaya difaac ka ciyaara Serie A